ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ကနေပြီး တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့ကို အခုလဆန်းပိုင်းက စက်လှေနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၈၅ ယောက်ကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေအရ တရားစွဲ အရေးယူသွားဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ ကော့သောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကနေ နေပြည်တော်ကို တင်ပြလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကော့သောင်းမြို့ကို ရောက်သွားကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေဟာ သက်သေခံအထောက်အထား လက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြတဲ့အတွက် နေရင်းဌာနေ ကို ပြန်မပို့ သေးဘဲ လဝက ဥပဒေနဲ့ အရေးယူဖို့ တင်ပြထားတာဖြစ်ကြောင်း ကော့သောင်းမြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနက အရာရှိက ပြောပါတယ်။
လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေနဲ့ တရားစွဲခံရပြီး ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးဒဏ်ငွေ ၅၀၀ ကျပ်နဲ့ အမြင့်ဆုံး ၂ နှစ်ထက်မပိုတဲ့ ထောင်ဒဏ်တွေ ကျခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ လဝက အရာရှိက ပြောပါတယ်။
အရေးယူခံရမယ့် ရိုဟင်ဂျာ တွေဟာ ပြည်ပနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်လာခဲ့ရာက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီခန့်မှာ ကော့သောင်းမြို့ သီရီမြိုင်ရပ်ကွက်ကို ဆိုက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိက အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။
" သူတို့က ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ သဲချောင်းဒုက္ခသည်စခန်းကပေါ့၊ သဲချောင်းကလာပြီးတော့ သူတို့က အဲဒီမှာ ပိုက်ဆံတွေ ပေးပြီးတော့ ထိုင်းကိုလာတာ၊ ကော့သောင်းကိုရောက်တော့ စက်လှေသမားက ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ ချပေးခဲ့တာ။ အသက် ၁၈ နှစ်အထက် ကျား ၃၁ ယောက်၊ မ ၅ ယောက် ပေါင်း ၃၆ ယောက်။ ၁၈ နှစ်အောက်ကတော့ ကျား ၄၀၊ မ ၉ ပေါင်း ၄၉ ပေါ့"
လောလောဆယ် သူတို့ကို ကော့သောင်းမြို့က ဆေးရုံဟောင်းမှာ နေရာချပေးထားပြီး မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေး အဖွဲ့နဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေက ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မလေးရှားမှ မြန်မာအလုပ်သမားများ အိမ်ပြင် မထွက်ဝံ့
ထိုင်းစက်ရုံမှ မြန်မာ အလုပ်သမားများ ပတ်စပို့ကိစ္စဆန္ဒပြနေ
မလေးရြား လူဝင်မထြိန်းသိမ်းရေးစခန်းက ူမန်မာနဲႛဗီယက်နမ်တြေ ထြက်ေူပးဖိုႛ ဋ္ဌကိြးစား
woe! how it is disgraceful to hear from the immigration officers about the Rohingya victims who had lost their close relatives, properties,rights,etc to be brought charges against them.no, never it is right path to send them into jail. we hope that government will take serious steps for that Rohingya to send them with guarantee of life safety into their native land.
Jan 09, 2013 02:54 PM
No need to watch them.They were naughty in arakan state.Send to the jail strictly.
Barbaric comment to refugees who are fleeing from persecution.
Jan 09, 2013 03:14 PM